Demands of the Burmese Society on Burmese Women – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 17 June 2010 18 October 2010 Categories Reproduction, Thoughts
15 thoughts on “Demands of the Burmese Society on Burmese Women”
17 June 2010 at 11:12 pm
I do not like when people say “girl shouldn’t do this and that”. So I always try to break those “so called” Burmese social rules. I stayed in the hotel with my husband during my visit to YGN. Hotel security guy thought I am one of those girls. When they seeagirl with foreigner immediately think “ call girl”.
When my sister came and look for me, he told my sis “no wonder I look older”. My poor American husband learns to call me wife in Burmese in public since then.
18 June 2010 at 4:54 am
Good article. I guess you should write more about us.
I think most of us, Burmese men are wimps as I have
observed they will abuse when they can, for example,
there will be heroes come out whenatheif is captured
but not so many will have balls to chaseatheif alone.
I studied atauniversity, lived inadorm, I despised
a lot of hostel students will rush back to friends if
they got insulted (most of the time, they are not that
innocent). Most of university student I met there were
Daddy’s and Mommy’s little boys but when they arrived
the university, they will act as machos but the univ.
I mentioned has 80% boys (I dont use the words young
men because I see most of my classmates as boys and
Burmese universities need reforms). Cheers!
18 June 2010 at 6:41 am
အဲဒါ discrimination ပဲ ဆရာ။ အဲဒီလိုမျိုးကို အလွန်မုန်းတီးပါတယ်။
ကျွန်မကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ ကျော် ကိုးတန်းကျောင်းသူဘ၀ကတည်းက လ္ဘက်ရည်ဆိုင် တယောက်ထဲ ထိုင်တယ်။
တက္ကသိုလ်ရောက်ချိန်မှာ ဘီယာ စီးကရက် သောက်တတ်နေပြီ။
ကျွန်မချစ်သူနဲ့ အတူ ဘီယာဆိုင်ထိုင်တယ်၊ စီးကရက်သောက်တယ်၊ ကျွန်မကတော့ ပတ်ဝန်းကျင်က မျက်စိတွေကို ဂရုမစိုက်ဖူးဆရာ။
လူမြင်ကွင်းမှာ ဗြောင်ကျကျလုပ်တာပဲ။ ကွယ်ရာမှာ ကုတ်ကမြင်းနေတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ်လဲ လိပ်ပြာလုံတယ်။
အခု ပြည်ပရောက်လာတော့ မိန်းကလေးငယ်တွေ ဆေးလိပ်တို့ ဘီယာ အရက်တို့ သောက်နေကြတာတွေ မြင်တွေ့နေရတာပဲ။
ကိုယ်သောက်လဲ ဘယ်မျက်လုံးနဲ့မှ ကဲ့ရဲ့ ကြည့်ကြမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သိတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မက အသက်ကြီးလာပြီမို့ ဒါတွေ မလုပ်ချင်တော့ဘူး။ ငယ်တုန်းက ကောင်းမယ်ထင်လို့ စမ်းသပ် လုပ်မိခဲ့တာတွေ ခုအချိန်မှာ ဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။
ငယ်ငယ်ကသာ မလုပ်ဖူးရင် အခု လုပ်ချင်လုပ်နေမိဦးမှာ။
နောက်တခုရှိသေးတာက ယောက်ျားတွေက အဲဒီလို မိန်းကလေးတွေကို ရှုံ့ချတာ ကြည့်တာ ထားပါတော့ မိန်းမချင်း အတင်းပြော အပုပ်ချနေတာတွေကို ပိုပြီး မုန်းတီးမိတယ်။
ယောက်ျားတွေသာ အရက်သောက် စီးကရက်သောက်ခွင့် လိုင်စင်ရထားသလိုပဲ။ ခွင့်လွှတ်နိုင်ကြတယ်။ မိန်းမချင်းကြတော့ ခွင့်လွှတ်ဖို့ မပြောနဲ့ ပိုတောင် ကဲ့ရဲ့လိမ့်မယ်မှတ်။
တခါတလေကျတော့လဲ ယဉ်ကျေးမှုတို့ ထုံးတမ်းစဉ်လာတို့က discrimination ကို အားပေးနေသလိုပဲ ဆရာရေ။
18 June 2010 at 3:24 pm
big round of applause for this article =)
19 June 2010 at 3:45 am
အရက်လည်း သောက်တတ်၊ ဆေးလိပ်လည်း သောက်ခဲ့ဖူး၊ တယောက်ထဲလည်း ခရီးသွား.. ဟိုတယ်မှာလည်း တည်းခိုခဲ့ဖူးတယ်၊ ရည်းစားတွေလည်း များခဲ့ဖူးတယ်.. ဒါတွေ အားလုံးကို နိုင်ငံခြားရောက်မှ လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ.. ရွှေပြည်မှာနေတုန်းက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ သူငယ်ချင်းကို စောင့်နေတုန်း၊ ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းမှာ လိုင်းကားစောင့်နေတုန်း.. ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့် တယောက်မှ မကြည့်ကြဘူး.. ကားရပ်ပြီးတော့ ပြီတီတီနဲ့ ဘယ်သွားမလို့လဲ ညီမလေးလို့ မေးတာတောင် မခံခဲ့ရဖူးဘူး..။ (နိုင်ငံခြားမှာလည်း ဒါမျိုး ပြီတီတီ မေးတာတွေတော့ ရှိတယ်.. ဒါပေမဲ့ ခပ်တည်တည် မျက်နှာတင်းပြီး ခပ်ပြတ်ပြတ် ငြင်းလိုက်ရင် သူတို့ကတောင် ပြန်တောင်းပန်သွားတာမျိုး… ဆိုတော့ကာ…)
19 June 2010 at 12:27 pm
21 June 2010 at 1:58 pm
22 June 2010 at 10:35 am
စာရေးဆရာက..ဘီယာဆိုင်မှာသူ့မိန်းမ စီးကရက်သောက်လို့ဘေးဝိုင်းကဘဲတွေ ၀ိုင်းကြည့်ကြတာ ခံနိုင်ရည်မရှိပုံကို(မြန်မာအမျိုးသမီးများအပေါ် မြန်မာ့လူ့ဘောင်ရဲ့ တောင်းဆိုမှု) ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်ကြီးကြီးတပ်လိုက်တော့ ပြုံးမိတယ်ကွယ်…
22 June 2010 at 3:58 pm
အေးဗျာ… ပြောရတာတော့ အားနာတယ်။ သည် ကော်မန့်လေးကို ဖတ်ပြီးတော့ ဆိုရိုးစကားတစ်ခု သွားသတိရတယ်။ ဘာတဲ့ “လမင်းကို လက်ညှိုးထိုးပြတဲ့အခါ ဦးနှောက်မပါတဲ့သူတွေက လက်ညှိုးကိုပဲ မဲကြည့်တတ်ကြတယ်”တဲ့ခင်ဗျ။ ထာဝရပြုံးနိုင်ပါစေနော်။
19 November 2011 at 2:24 am
“လမင်းကို လက်ညှိုးထိုးပြတဲ့အခါ ဦးနှောက်မပါတဲ့သူတွေက လက်ညှိုးကိုပဲ မဲကြည့်တတ်ကြတယ်” မှတ်သားလောက်ပါပေတယ်ဆရာရေ……
1 January 2020 at 11:13 am
ကို ကြီးကျော်သည် စာရေးရုံသာမက စကားအလွန်တတ်သော စာရေးဆရာပါတကား။
22 June 2010 at 9:26 pm
တကယ်တော့ မိန်းမက မိန်းမ၊ ယောက်ျားက ယောက်ျားပဲ။ သူ့နေရာနဲ့ သူပဲလေ။ မတူတာတွေကို တော့ မတု တာပဲ ကောင်းပါတယ်။ နိုင်ငံတိုင်းမှာ သူ့ယဉ်ကျေးမှူနဲ့ သူ ရှိကြတာပဲ။ ရောမ မှာတော့ ရောမ လို ကျင့်သင့်တာပေါ့။ မိန်းမတွေ အရက်သောက်၊ ဆေးလိပ်သောက်၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တယ်ဆိုတာ အစကတည်းကရှိခဲ့ရင်၊ အစကတည်းက အများစုသာ လုပ်ခဲ့ရင် ဘာမ ပြောကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ နေတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ဆိုးဒဏ် ကောင်းဒဏ်လေးတွေ ခံရမှာပေါ့။ လူရဲ့ သဘာဝ ဆိုတာ ကလည်း ချီးမွမ်းဖို့တာ ခက်တာ ကဲ့ရဲ့ဖို့ဆို အခု ချက်ခြင်းပဲ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ အမြင်အမျိုးမျိုးနဲ့ပြောနေကြမှာပဲ။ ကိုယ့်ဘာသာ သူများပြောတာ ဂရုစိုက်မလား၊ ဂရုမစိုက်ဘူးလား ဒါပဲ ရှိတယ်။
“ကျွန်တော်က ယောက်ျား၊ ကျွန်တော်က အိမ်ထောင်ဦးစီး၊ ကျွန်တော်က ထမင်းရှင်ဆိုတဲ့ အပေါက်မျိုးနဲ့ အိမ်တွင်းမှာ ခြယ်လှယ် စိုးမိုးမှုမျိုးကိုလည်း မလုပ်ချင်ပါဘူး။ မိသားစုအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလည်း ကျွန်တော်တစ်ဦးတည်း ချမှတ်လေ့ မရှိဘူး။” ဒီ အချက်လေးကို အရမ်း ကြိုက်ပါတယ်။ ဟုတ်တယ်ဗျ အိမ်ထောင်ဆိုတဲ့ မိသားစုလေး ဖြစ်လာရင် အိမ်ထောင်ဦးစီးကလည်း အိမ်ရှင်မကို မကျောသင့်ဘူး၊ ဆရာ မလုပ်သင့်ဘူး။ အိမ်ရှင်မ ကလည်း အသက် ကြီးသည် ငယ်သည်ဖြစ်စေ ကိုယ့် အိမ်ထောင်ဦးစီး အပေါ်ကို မလေး မစားမဆက်ဆံသင့်ဘူး။
ကြိုက်ပါတယ် ဒီလို ဆောင်းပါးလေးတွေကိုလည်း နောက်များ ဖတ်ချင်ပါသေးတယ်။
ဆရာ့ရဲ့ ဆောင်းပါးတွေက အမြဲတမ်းမှတ်သားစရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတာပဲ။ ဟုတ်တယ်နော်
လူလူချင်းပဲ ဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးရတာကြတော့မတူဘူး။ ဆိုကြပါစို့ လူခွဲမရှိတဲ့ လင်မယား ပေါ့။
လင်ရောမယားပါ နှစ်ယောက်လုံး အလုပ်လုပ်ကြတယ် ဒါပေမဲ့ အလုပ်ပြန်လာတော့
မိန်းမလုပ်တဲ့သူက ထမင်း ဟင်းချက်ရသေးတယ်။ ကဲကြည့်ပါအုန်း ကွာခြားလိုက်တဲ့ အခွင့်အရေး။
အဲဒါကတော့ အခွင့်အရေးကွာခြားတာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ အလိုက်မသိတတ်တဲ့ လင်ယောက်ျားဖြစ်နေတာမို့ပါ မမခရေညိုရယ်။ယောက်ျားမို့ မချက်ရဘူးလို့ ဘယ်သူက သတ်မှတ်ထားလို့လဲ။
26 June 2010 at 10:15 am
ဆရာ့ဆောင်းပါးတွေကို မဂ္ဂဇင်းတွေကရော ခု web စာမျက်နှာတွေပေါ်ကပါ အမြဲတမ်းဖတ်လာပြီးအားပေးနေတဲ့ ဆရာ့သမီးတယောက်ပါဆရာ
ဆရာ့ကိုလဲအမြဲတမ်းမေးလ်တွေပို့နေတဲ့သူတယောက်ပေါ့ ဆရာ့ရေးထားတာတွေသိပ်ဗဟုသုတရတာပါပဲ သမီးကတော့ပတ်ဝန်းကျင်က မိန်းကလေးတယောက်မို့လို့ဆိုတဲ့
ပုံစံမျိုးနဲ့လာတိုင်းလှောင်ပြုံးပြုံးပြလိုက်တာပါပဲ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ်ကအလုပ်လုပ်နေလို့နေရာစုံရောက်နေတာကို မျက်မှန်မည်းတပ်ပြီးတော့ကိုပြောဆိုနေလို့ပါ
ယောက်ျားလေးအတော်များများ ဆရာပြောသလိုပေါ့လေ ထိကပါးရိကပါးဖြစ်လာရင်လဲ ဆရာရေးထားတာတွေကိုတွေးပြီးမြင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကို လူကအလိုလိုရှောင်တတ်တိမ်းတတ်သွားပါတယ်ဆရာ
အဟီး အဲဒါကြောင့်ခုထိရည်းစားမရသေးဘူးဆရာ တချိန်ချိန်ကျရင်စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စလို့သိပေမယ့် ခုထိတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်လို့မ၀သေးဘူးရယ်
ဘယ်လိုပဲပြောပြောဆရာ့တပည့်တယောက်အနေနဲ့ ဆရာ့မျက်နှာအိုးမည်းသုတ်တဲ့အဖြစ်မျိုးဘယ်တော့မှမရှိစေရဘူးလို့ ကတိပေးပါတယ်
အောင်မြင်အောင် အစဉ်အမြဲကြိုးစားလျက် ချမ်းချမ်း
Previous Previous post: About Diamond Earrings, Fakes, and Cheeks
Next Next post: Limp wristed